Dhagayso: Dhismooyinka lagu hormarinaayo wadooyinka magaalada baydhabo oo weli ay socdaan. | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Dhagayso: Dhismooyinka lagu hormarinaayo wadooyinka magaalada baydhabo oo weli ay socdaan.
Dhagayso: Dhismooyinka lagu hormarinaayo wadooyinka magaalada baydhabo oo weli ay socdaan.
Maamulka gobolka bay midka degmada baydhabo iyo hay`adaha qaar ee ka shaqeyaan hormarinta gobolka ay ugu horeyso hay`ada norwey ayaa waxaa ay ku guleysteen in ay dib udhis ay ku sameyaan qaar kamid ah wadooyinka bur=bursan ee kuyalaan xaafadaha magaalada baydhabo iyadoo horey ay udhiseen kuwo badan ayaa hadana waxay wadaan dadaalo ku aadan sidii loo dar dargalin lahaa dhismooyinka wadooyinka kale ee harsan.
Maamulka hada waxaa uu ku howlan yahay dhismaha wadada dheer ee isku xirta xaafada berdaale iyo xaafada cunay kaasi oo ah wado aad u bur bursan, waxaana lasaari donaa wado dhagax ah oo wax weyn ka bedeli doono isu socodka dadka iyo gadiidka.
Gudoomiyaha gobolka bay Cali Wardheere Cabdiraxmaan Dooyow oo kahadlaayay dhismooyinkaan wadooyinka ah ee kasocdaan magaalada baydhabo in ay tahay mid ay ku socdaan si wanaagsan, wuxuu tilmaamay in hada shacabka magaalada ay fahmeen mihiimada ay leeyihiin dhismooyinkaani iyagoo horey ugu doodi jireen cabirka dib loogu bur burinaayo guryahooda oo ay soo galeen wadada.
Dhanka kale gudoomiye Cali Wardheere ayaa sheegay in dhismooyinkaani wax badan ay soo mujireen oo sidoo kale qeyb ay kaqateen soo muujinta xarumaha kale ee loogu adeego bulshada baydhabo sida isbitaalada iskuulada iyo kuwo kale.
Cali Wardheere gudoomiyaha gobolka bay ayaa sheegay in tani ay qeyb ay katahay amaro uu horey uu u bixiyay Madaxweynaha koonfur galbeed Mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lagta gareen si buu yiri in hormarka bulshada koonfur galbeed hoos laga soo bilaawo si ay u fahmaan kaalina ay ugu qataan bilicda iyo harmarka gobolka.
Previous articleJaamacadda Carabta Oo Ka Hortimid Qorshihii Trump Ee Bariga Dhexe.
Next articleWasaarada Haweenka KG iyo Saraakiisha Ciidamada oo Baydhabo ku qabtey Kulan looga hadlaayay Tacdiyada iyo Xaquuqda ka dhanka ah Caruurta .